Induction Melting Copper, aluminium, vy, vy, volamena, Afo Afovoany
Home / Applications / Induction Melting / Mitsonika induction
Sokajy: Induction Melting Tags: induction melting, induction melting metal, pifidianana, fanamboarana fofona, mpandrendrika, fofona afon-tsilo, vy miempo, fanalefahana metaly mitsonika
Inona ny fiorenan'ny fampidirana?
Induction melting dia dingana iray izay ahalefaka ao anaty lafaoro ao anaty lafaoro fandrahoana ny metaly. Araraka avy ao anaty vilany ny metaly metaly avy eo, matetika ao anaty tsipy.
Induction melting dia tena haingana, madio ary fanamiana. Rehefa vita tanteraka ny dia, ny fivoahana indraindray dia madio tanteraka ka azo atao ny mitsambikina ny dingana fanadiovana izay ilaina amin'ny fomba hafa. Ny hafanana tafiditra ao anatin'io metaly io ihany koa dia manampy amin'ny vokatra faran'izay tsara. Lafaoro fandrefesana HLQ Induction Manana endri-javatra fanampiny. Tsy vitan'ny hoe manao asa toerana azo antoka kokoa izy ireo, fa hampitombo ny vokatra vokariny amin'ny alàlan'ny fanatontosana haingana kokoa sy mora kokoa. Aiza izy io no ampiasaina? Mananara Fampidiran-tsolika dia ampiasaina amin'ny orinasa, oniversite, laboratoara sy foibe fikarohana. Ny rafitra dia mandoto ny zava-drehetra avy amin'ny metaly vy sy tsy manangon-koditra amin'ny fitaovana nokleary sy ny diplaoma ara-pitsaboana.
Inona no fitaovana / fitrandrahana misy?
HLQ Induction Heating Machine Co dia manolotra maro samihafa induction fusion fio Ny varotra mifanaraka amin'ny filaharan'ireo karazan-tsindrimandry: singa tokana miendrika tapa-damosina, tapa-danjan-dàlan-dongy, kodiarana mivezivezy, rindrina ary laboratoara.
Induction Glass Glass
Fampidiran-drano mivalona varahina
Induction Melting Gold